RIKOOOO MD11 AND 777 ungabonakali
umbuzo RIKOOOO MD11 AND 777 ungabonakali
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #599 by suythe
Ndiye ndisebenzisa iRioooo A330 kunye neyona nto imangalisayo, kodwa kungekudala ndazama ezinye iimveliso ezifana ne-MD-11 kunye ne-777
Lezo mveliso zihlala ziphazamiseka xa zihamba. Ukuba ngaba ndenza i-manicors P3D iya kuphazamiseka.
Ngethemba ukuba ndifumana isisombululo kule nto.
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #600 by Dariussssss
Sawubona apho kwaye wamkele kwiRiooooo.
Ndasebenzisa nabo bonke kwi-FSX, ngaphandle kwengxaki. Kufuneka uqinisekise ukuba iiplani ozisebenzisayo ziyahambelana ne-P3D yakho. Xa uvula iphepha, masithi-MD-11, uza kubona oku: Nge-FSX & FSX-Steam & Prepar3D v1 (v2 & 3 ukuvavanya), ngoko kufuneka uqinisekise ukuba iyahambelana.
Njengoko ithetha, i-v2 kunye ne-v3 ukuvavanya, iimpazamo zinokwenzeka.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: suythe
Ixesha ukwenza page: 0.179 imizuzwana